laacibfm.com » Arsenal Oo Dalab Ka Gudbisay Ciyaartoy Ay Ku Dagaallamayaan Barcelona, Juventus, Chelsea Iyo Kooxo Kale
Arsenal Oo Dalab Ka Gudbisay Ciyaartoy Ay Ku Dagaallamayaan Barcelona, Juventus, Chelsea Iyo Kooxo Kale
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dalab ka gudbisay difaaca reer France ee Layvin Kurzawa oo dhinaca bidix uga ciyaara Paris Saint-Germain, kaas oo heshiiska uu kula jiro naadigiisu uu ku egyahay dhamaadka bisha June.
Layvin Kurzawa ayaa xor noqon doona bisha July ee sannadkan marka uu dhamaado heshiiska uu kula jiro PSG, waxaana hirdan u geli doono kooxo badan oo ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha iyo magacaba weyn Yurub, hase yeeshee Arsenal ayaa xilli horeba gudbisay dalab ay ciyaartoygan ku doonayso inay ku qanciso inuu Emirates yimaaddo bisha July.
Barcelona oo beddelka Jordi Alba raadinaysa ayaa la sheegay inay tartanka si xooggan ugu jirto, sidoo kalena Juventus, Chelsea, Inter Milan, AC Milan iyo Napoli ayaa dhamaantood garaacaya albaabka laacibkan.
Kooxda reer Spain ee Barcelona oo Junior Firpo ula soo saxeexatay inuu beddel u noqdo Alba oo ay da’diisu sii weynaanayso, xili ciyaareedkana ay dhaawacyo kusoo noqnoqdeen, ayaa filashadaasi gabaabsi noqotay marka la eego bandhiggiisa muddadii uu joogay Camp Nou, taasina waxay ku riixaysaa inay xadhkaha u xidhaan oo ay Arsenal, Juventus, Chelsea iyo kooxaha kale iskaga hor yimaaddaan dagaal adag oo ay ku kala jiidanayaan Kurzawa.
Difaacan ayaa bishii January ay kooxo Ingiriis ah isku dayeen inay heshiisyo la saxeexdaan, laakiin dhamaantood waxba kama suurtogelin.
Arsenal oo sidoo kale lala xidhiidhinayo ciyaartooyo intooda badan ay ku doonayso qaab xor ah sida Willian, ayaa waxay Layvin Kurzawa ku darsanaysaa liiskaas oo ay dhinac socon doonaan laacibiin amaah ah sida Luka Jovic iyo Jesse Lingard oo ay amaah kaga doonayso Real Madrid iyo Manchester United.